Thola amabhishi amahle kakhulu eHuelva | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | General, Huelva, Amabhishi
La Isifundazwe saseHuelva sisinikeza amakhilomitha namakhilomitha ogwini lolwandle ngamabhishi amahle ukujabulela isimo sezulu sawo esihle, ngoba kuyisifundazwe esisengxenyeni eseningizimu yeSpain emngceleni wePortugal. Namuhla ezokuvakasha zingenye yemisebenzi yazo enenzuzo enkulu, ngoba lelo guha elaziwa kakhulu linezintelezi eziningi zalabo abeza eHuelva, ngakho-ke sizobuyekeza ukuthi yimaphi amabhishi amahle aseHuelva.
Kukhona eziningi amabhishi eHuelva ngakho-ke khetha amahle kakhulu kungaba okukhohlisayo kancane. Impela kunemibono yakho konke ukuthanda futhi eminye ithandwa kakhulu kunezinye kepha sizozama ukunikeza umbono ngamabhishi okungafanele aphuthelwe uma sizohamba ngeHuelva.
1 Ibhishi lase-Islantilla
3 Ibhishi leMatalascañas
4 Ibhishi lase-El Rompido
5 ITorre del Loro Beach
6 Ibhishi lasePunta Umbría
Lolu bhishi luthandwa kakhulu, njengoba lunjalo etholakala phakathi kwedolobha lase-Isla Cristina neLepe. Ingaphezulu kwekhilomitha ubude futhi inezikhala eziningi. Kujwayelekile ukubona imindeni kuleli bhishi kwazise ingenye yalezo ezinazo zonke izinhlobo zemisebenzi, okwenza izinto zibe lula uma uhamba nezingane. Kepha futhi inezindawo ezithule kakhulu. Kulolu lwandle kukhona nehlathi elihle likaphayini uma sikhathele ukugcotshwa yilanga nezinye izindunduma ezingaba yindawo enhle yokuphumula. Lapho ukuphuma kwegagasi, kunendawo enkulu yolwandle lapho ungahamba khona okunconywa kakhulu kusukela ngaleyo ndlela singabona izindawo eziseduze njengePlaya del Hoyo. Leli ngelinye lamabhishi athandwa kakhulu futhi anefulegi eliluhlaza unyaka nonyaka ngekhwalithi yamanzi nezinsizakalo zalo.
Leli ngelinye lamabhishi azoncoma lona ngokuqinisekile uma uya eHuelva. I- Ibhishi i-El Portil lifakwe emadolobheni yize manje selisendaweni yokulondolozwa kwemvelo. Leli bhishi lihle kakhulu, linamakhilomitha angaphezu kwamathathu ubude, ngakho-ke ngeke sibe nomuzwa wokuhaqwa ngabantu uma sibheka izingxenyeni ezithe xaxa zezindawo ezisemadolobheni. Olunye ulwandle olusefulegi oluhlaza okwesibhakabhaka olunikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene. Futhi kusuka kule ndawo ungabona iFlecha del Rompido.
Leli bhishi lidume ngempela ngoba ingaphezu kwamakhilomitha amahlanu ubude futhi kwenza ukufinyelela ngezinyawo ukufinyelela eDoñana National Park, okuyindawo yayo yemvelo ebaluleke kakhulu. Inikela ngamanzi acwebile nezinsizakalo, kepha futhi igcwele kakhulu ehlobo ngoba ingesinye esithandwa kakhulu futhi esiseduze neSeville, okwenza kungabi yisinqumo esihle kakhulu uma sifuna ubumfihlo. Kepha-ke wulwandle okumele luhanjelwe ngoba singakwazi nokuthola indawo yokulondoloza imvelo. Kule ndawo singabona futhi iTorre de la Higuera, ukwakhiwa kwekhulu le-XNUMX okwadilika lapho kuzamazama umhlaba eLisbon. Nalo lolu lolwandle lapho abalandeli bezemidlalo yezamanzi abanjenge-windsurfing beza khona.
Ibhishi lase-El Rompido
Leli ngelinye lamabhishi ozolithanda, nesihlabathi salo esihle segolide futhi esise- IMarismas del Río Piedras Natural Park. Ungahamba ngesikebhe uye esikhafuleni sesihlabathi esingabonakala ogwini, esaziwa ngeFlecha del Rompido. Ulwandle oluthule kakhulu olungenazo izinsizakalo kepha lapho ungajabulela khona imvelo ngokwengeziwe. Eduze nomuzi wokudoba waseCartaya, indawo enhle enezindlu zabamhlophe.
ITorre del Loro Beach
Lolu bhishi lungenye yalezo thina vumela ukuthi ujabulele izindawo ngaphandle kwezindawo eziningi zasemadolobheni, yedwa nemvelo. Lolu bhishi lunokufinyelela okuhle nokupaka, yize kufanele uhambe ngezinyawo usuka kule ndawo uye olwandle, ngakho-ke akuvamisile ukuthi kunconyelwe imindeni noma abantu abanokuhamba okunciphile. Kuyibhishi elikhulu lamakhilomitha amane nesihlabathi esivamile segolide sendawo lapho sizophinde sithole khona nenqaba yokulinda endala kusukela ngekhulu le-XNUMX okuyilona elinikeza leli bhishi igama lalo. Lo mbhoshongo ungowasePalos de la Frontera, Moguer, Almonte naseLucena del Puerto.
Ibhishi lasePunta Umbría
Leli kuzoba ngolunye lolwandle olumatasa ngesikhathi sasehlobo njengoba kungulwandle lwasemadolobheni ePunta Umbría. Itholakala eduze ne- Indawo yemvelo yaseMarismas de Odiel ngakho-ke inenani elikhulu. Ulwandle olunikeza zonke izinsizakalo futhi yingakho imvamisa kuyintandokazi yalabo abahlala kule ndawo, futhi kubalwa nefulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka ngakho konke elikunikeza izivakashi. Kodwa-ke, kunamanye amabhishi asondelene kakhulu afana neLa Canaleta. Ebhishi eliseduze le-Enebrales futhi ungazijwayeza ubunqunu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amabhishi amahle aseHuelva
IPorto namabhishi ayo amahle